XOG: Axmed Madoobe oo looga yeeray Imaaraadka+(Ujeedka & damaca jira oo la ogaaday) | Somalia News
XOG: Axmed Madoobe oo looga yeeray Imaaraadka+(Ujeedka & damaca jira oo la ogaaday)
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa sida wararku sheegayaan waxaa looga yeeray Imaaraadka Carabta, halkaas oo ah marjaca siyaasadeed ee ay u laabtaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada.
Magaalada Nairobi waxaa ka socda dhaq dhaqaaqsiyaasdeed ee ku wajahan doorashada Soomaaliya, taas oo ay horkacayaan mas’uuliyiin iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed gaar ahaan Hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka kuwooda ugu miisaanka culus.
Sidoo kale, magaalada Nairobi waxay marin u ahayd siyaasiyiin uga sii gudbbay UAE, halka maalmo ka hor uu joogay Madaxweynaha Puntland oo u sii gudbay Imaaraadka Carabta.
Xog badan lagama hayo ujeedka Axmed Madoobe looga yeeray Imaaraadka Carabta, balse ilo xog ogaal ah oo ku dhow madaxtooyada Jubbaland ayaa inoo sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu magaalada Abu Dubai kula kulmayo madax ka tirsan Imaaraadka Carabta, kuwaas oo saameyn ku leh siyaasadda Soomaaliya.
Magaalada Nairobi oo sanadihii la soo dhaafay aheyd marjaca ololaha doorashada, Musharaxiinta qaar xarun u aheyd iyo Siyaasiyiinta ku xeeldheer arrimaha Campaign-ka ayaa waxaa maalmahan ka socday dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed, sidoo kale waxay marin u aheyd Siyaasiyiin uga sii gudubtay UAE,halka maalmo ka hor uu joogay Madaxweynaha Puntland oo u sii gudbay Imaaraadka Carabta.
Nairobi waxay aheyd halkii saldhigga u ahaa oo uu ololaha doorashada ka waday sanadkii 2016 Farmaajo iyo rag badan oo saaxibadiisa oo uu ka mid yahay Taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo halkan deegaan u aheyd 15-kii sano, balse markii xiriirka Soomaaliya iyo Kenya xumaaday isaga guuray, halka Kooxda Madaxweyne Farmaajo ay iyana ka aag bedesheen.
Haddaba waxaa la is weydiinayaa mar kale Nairobi ma soo saari doontaa Musharax ku guuleysta xilka Madaxweynaha si la mid ah Madaxweyne Farmaajo oo markii December 2016 uu ka soo tagay dhowr afartan cisho kaddib ku guuleystay xilka Madaxweynaha Soomaaliya 8 February 2017.
Previous articleUK says withdrawal of AU troops relies on Somalia’s stability
Next articleSouth Sudan military court jails 24 soldiers for rape, killings